5 zvikanganiso mukutengesa email kuti udzivise | ECommerce nhau
5 zvikanganiso mukutengesa email kuti udzivise
Email-based kushambadzira iyo inonyanya kukosha kune chero bhizinesi reEcommerce. Asi zvakakosha kuti kana iwe ukatumira maemail kune vatengi vako, aya mameseji anomira kubva kumazana ayo iwo chete mutengi anogamuchira Kune zvakare zvikanganiso mukushambadzira kweemail zvaunofanira kudzivirira.
1 1. Tumira maemail kubva ku "donotrepley@yourdomain.com"
2 2. Tumira mameseji akavakirwa pamifananidzo chete
3 3. Usabatanidze kune yako Ecommerce saiti
4 4. Usaite segment kana kugadzirisa
5 5. Regedza nhare mbozha
1. Tumira maemail kubva ku "donotrepley@yourdomain.com"
E-mail kero dzakadai hadzisi nyore uye hadzigamuchirwe kana. Kana iwe ukatumira maemail kubva pane izvi mhando yemakero, iwe uchave uine yakaderera yakavhurika mwero. Iwe unofanirwa kugara uchitumira maemail kubva kukero iyo vatengi vako vanogona kupindura, uchiva nechokwadi chekusanganisira ese manhamba erunhare uye zvinongedzo kumasocial network.
2. Tumira mameseji akavakirwa pamifananidzo chete
Uku ndiko kumwe kukanganisa kwakajairika mu tsambambozha Marketing uye kuti unofanira kudzivisa zvachose. Icho chikonzero chiri nyore, sezvo chete 33% yevanyoreri veemail vane iyo mufananidzo kuratidzwa. Izvi zvinoreva kuti meseji yako inongoratidzwa nenzvimbo hombe isina chinhu uye vatengi havazozive zvauri kutaura.
3. Usabatanidze kune yako Ecommerce saiti
El chinangwa chekushambadzira email ndeyekuti vatengi vatore pane rako reEcommerce bhizinesi. Dambudziko nderekuti kana yako link ichivatungamira kune iyo peji remba, ivo vanokona kupururudza kuburikidza newebsite yako kuti uwane chinopihwa. Naizvozvo mameseji ako anofanirwa kusanganisira kana kamwe chete chinongedzo chinobatanidza kune peji rekumhara.
4. Usaite segment kana kugadzirisa
Segmentation inogona kuve yakakosha kana yakaoma, asi kana iwe ukakamura yako yekunyorera runyorwa mumapoka akasiyana uye uchigadzirisa mameseji eamuverengi wega wega, iwe uchaona yakakwira yekudzvanya-kuburikidza nemitengo uye vazhinji vazhinji vanobatirana vatengi.
5. Regedza nhare mbozha
Vanenge makumi mana nematatu muzana yevanhu vanoongorora maemail avo kubva kumafoni avo uye vanopfuura makumi mana muzana evashandisi veemail kubva kunhare mbozha, tarisa mameseji avo kana kana pazuva. Naizvozvo, kana iwe tsambambozha Marketing Haina kugadzirirwa nharembozha, kunyangwe ikoshe sei meseji yako, vanhu vanozoisiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » 5 zvikanganiso mukutengesa email kuti udzivise
Chii chekutarisa paunosarudza iyo Hosting kana iwe uri muzvinabhizimusi?
Siteleaf, Zvemukati maneja zvemapeji ewebhu